Jordan Henderson & Harry Maguire miyey ka soo muuqan doonaan kulanka xulkooda England uu caawa la ciyaarayo Czech Republic? – Gool FM
Haaruun June 22, 2021
(Yurub) 22 Juun 2021. Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson & Kabtanka Man United ee Harry Maguire ayaa la soo warinayaa inay ka soo muuqan doonaan kulanka xulkooda England uu wajihi doona Czech Republic.
Warkii ugu dambeeyey ee soo baxay goordhow ayaa sheegaya in Jordan Henderson iyo Harry Maguire ayaa ka soo muuqan doona markii ugu horreysay Euro 2020 kulanka xulkooda England ugu dambeeya ee Guruubka D, kaasoo ay caawa wajihi doonaan dhiggooda Czech Republic.
Dhanka kale, Raheem Sterling iyo Phil Foden ayaa sidoo kale ilaashan kara booskooda safka hore ee xulka Saddexda Libaax, inkastoo xulku qaab ciyaareed niyad jab leh muujiyay kulankii Jimcihii ee la ciyaareen Scotland.
Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa haatan sugaya caddeynta ka soo baxaysa Public Health England haddii Ben Chilwell iyo Mason Mount ay u baahan yihiin inay sii wadaan karaantiilkooda, kaddib markii labada laacib ay xiriir dhow la yeesheen Billy Gilmour, kaasoo laga helay Korona Fayras.